Muuse Biixi Cabdi: Mujaahidka Keliya Ee Magaciisa Lagu Xardhay Manhajka Waxbarashada Somaliland!! | Dhamays Media Group
Muuse Biixi Cabdi: Mujaahidka Keliya Ee Magaciisa Lagu Xardhay Manhajka Waxbarashada Somaliland!!
Golaha Guurtida Somaliland oo ku abtirsada SNM waxa uu Mujaahid Xasan Ciise Jaamac ii sheegay in abaabulkiisa la bilaabay sannadki 1983kii. Wakhtigaasi waa xilliyadii la caleema-saaray Suldaan Xasan Bulbul oo ku suntanaa Suldaanka Beelaha Isaaq ee Itoobiya. Sidoo kale waxa uu Mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale ku sheegay in shirkoodii kowaad uu ka dhacay Dooxada Daahiir Maadhiin ee Rabaso 1984kii, waxaana kala qayb-galay Marxuun Ibraahin Meygaag Samatar oo ahaa ku-simaha Guddoomiyaha SNM.
Goluhu waxa ay sidoo kale shir qabsadeen 1985kii. Sannadihii 1986kii iyo 1987kii shirkoodu ma qabsoomin waxaana sabab u ahaa dilkii Marxuun Suldaan Xasan Bulbul. Sidoo kale waxa caqabad ahayd in odayaasha Somaliland ay badankoodu ku sugnaayeen gudaha dalka. Markii laga bara-kacay Hargeysa iyo Burco 1988kii ayaa dib loo abaabulay Golaha Guurtida waxaanu shirkoodu ka dhacay Cadaroosh 1988kii, sidoo kale waxa ay ku shireen Madaweyn 1989kii.
Golaha Guurtida waxa xubin sharci ah loo ansixiyay shirkii Balligubadle ka dhacay 1990kii ee lagu doortay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Xasan Ciise Jaamac. Kal-fadhigoodii kowaad waxa uu ahaa Shirkii Boorama ka dhacay ee 1993kii lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax.
Haddaba golaha la sameeyay 1983-1984 sidee ayaa curintiisa loogu nisbayn karaa Muuse Biixi oo SNM ku biiray 1986kii? Ma tahay in taariikhda lagu xuso aasaaska dhacay 1984kii? Muuse Biixi Cabdi waa halgamaaga keliga ee magaciisa lagu xardhay buugga taariikhda fasalka afraad ee dugsiyada sare ee Somaliland. Dhiganahan oo uu ku jiro cutub ka sheekaynaya SNM, waxa la daabacay gug’gii hore ee 2016ka.
Diiwaankan waxa qore ka ahaa Axmed Cali Quulle Agaasimaha Waaxda Qorshaynta Ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland, oo hayb ahaanna ay xigaal dhow yihiin Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Waxa ay dood adagi dhex martay tifaf-tireyaashii buugga oo reer Awal ahaa “Haddii SNM la yidhaahdo waxa ay noqonaysaa reer/beel. Markaa habkan aad u qortay waa mid aan u qalmin ummadda Somaliland oo dhan” ayay yidhaahdeen.
“Anigu in aan sidii saxda u ahayd u qoray ayaan u arkaa, waana halgan dhacay. Somalilandna waxa dhashay SNM” ayuu qoraagu ku dooday. Cabbaar kolkii hadalka la isku mari waayay ayaa uu Cabdillaahi Yaasiin Agaasimaha Waaxda Manaahijta Ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland uu yidhi “Isagu sidaas ayuu qoray, idinku wax-ka-beddel ku sameeya”. Sidaas ayaana lagu af-xidhay dood socotay laba saacadood oo aan goobjoog u ahaa. Murankaas awgii waxa uu buuggani ahaa kii ugu dambeeyay ee la daabaco.
Cabdillaahi Ibraahin Habbane Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland oo 14kii Juun 2016ka ka hadlaya munaasibad uu Prof Axmed Ismaaciil Samatar kaga biiray KULMIYE oo Boorama lagu qabtay ayaa yidhi “Aragtida aasaaska Golaha Guurtida waxa lahaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, waxaanu rayigan keenay 13kii Ogos 1988kii, sidaasna waxa ii sheegay Marxuun Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre”. Waxa aan u arkaa in aasaaska guurtida lagu saleeyay aragtidii Wasiirka.
Previous: “Reer Gabilayoow Ma Dawlad Sacad Muuse Ah Ayaa La Ictiraafi Doona Mise Dawlad Isaaq” Faysal Cali Waraabe + Video
Next: Wasiirka Madaxtooyada Oo Lagu Eedeeyay Khilaafka Golaha Wakiillada Oo Cakirmaya